अन्धा मिति: कसरी व्यवहार गर्ने? - लाभ र हानि
एक अन्धा मिति, पक्कै पनि, जो निराश र एक सम्बन्ध मा हताश छन् को लागी अन्तिम आशा छैन। सब भन्दा पहिले, यस्तो बैठक संग, तपाइँ वास्तविक जीवन मा महिला / तपाइँको सपना को पुरुष लाई भेट्न सक्नुहुन्छ।
धेरै बर्षहरु को लागी, मनोवैज्ञानिकहरु विवाहित जोडीहरु को व्यवहार को अध्ययन गरी रहेको छ, साथ साथै उनीहरुको सम्बन्ध को प्रकृति। उनीहरुको कामको नतिजा कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। जब एक सर्वेक्षण आफ्नो परिचित को विधि को बारे मा आयोजित गरिएको थियो, ती मध्ये धेरैले जवाफ दिए कि उनीहरुका साथीहरु को माध्यम बाट भेटे।
मैले त्यो भन्नै पर्छ अन्धा मितिहरु सधैं एक तार्किक अन्त को लागी नेतृत्व गर्न सक्दैन, त्यो हो, एक खुसी वैवाहिक जीवन। यो एक साँचो परीक्षण हो कि बिस्तारै र स्थिर एक वास्तविक आपदा मा बढ्न सक्छ।
तपाइँ यो हुन बाट कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? यो मुद्दा बुझ्ने कोसिस गरौं।
यो स्थिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ
तपाइँ लगातार अन्य मानिसहरु को नेतृत्व पछ्याउन र तपाइँको इच्छा को बिरुद्ध जानु हुँदैन। यदि तपाइँलाई लाग्छ कि तपाइँ अस्वीकार गर्न आवश्यक छ, यो गर्नुहोस्। एक मानिस आफ्नो आमा को एक राम्रो साथी को छोरी संग भेट्न बाध्य छैन मात्र पछि अपमानजनक छैन।
तपाइँ सक्रिय रूप मा बैठकहरु को समय तालिका मा संलग्न हुनु पर्छ।
तपाइँको सट्टामा, र तपाइँको सहमति बिना मिति को लागी एक ठाउँ र समय सेट गर्न को लागी अरु कसैलाई अनुमति नदिनुहोस्। अज्ञात को सबै तत्वहरु रहस्यमय महिला को लागी बाहेक, मिति बाट बहिष्कृत गरिनु पर्छ।
एक बैठक को लागी एक ठाउँ छ जहाँ दुबै सहज महसुस गर्न सक्छन्।
बैठक को लागी एक उपयुक्त स्थान छान्नुहोस्
एक सिनेमा, एक चट्टान कन्सर्ट, जहाँ यो धेरै शोर छ, पहिलो बैठक को लागी सबैभन्दा सफल ठाउँ नहुन सक्छ। यो एक रेस्टुरेन्ट वा क्याफे, जहाँ तपाइँ एक काट्न र सुखद संगीत सुन्न को लागी बस्न सक्नुहुन्छ, यो एक अधिक रोमान्टिक सेटिंग हुनेछ।
पहिलो मिति मा, उनीहरु सामान्यतया मात्र एक अर्कालाई थाहा पाउन चाहान्छन्, एक राम्रो समय छ र एक अर्काको बारेमा एक राय बनाउन।
मिति बाहिर तान्नुहोस्
जे होस् पहिलो बैठक मा हुन्छ, यो धेरै लामो, कम से कम दुई घण्टा भन्दा बाहिर तान्नु हुँदैन। सामान्यतया एक अन्धा मिति एक रेस्टुरेन्ट मा ठाउँ लिन्छ, डिनर को शुरुवात, परिणति र एक बैठक को अन्त्य हो, सिद्धान्त मा, घटनाहरु को एक प्राकृतिक पाठ्यक्रम।
जब वेटर बिल पेश, यो एक संकेत हो कि मिति समाप्त गर्न को लागी आवश्यक छ। यदि सबै कुरा पहिलो बैठक मा बाहिर काम गर्दछ, तपाइँ अर्को मिति बनाउन सक्नुहुन्छ।
अन्धा मितिमा कुनै तेस्रो व्यक्ति हुनुहुँदैन
यदि मिति युवा व्यक्तिहरु लाई पेश गर्ने व्यक्ति को उपस्थिति मा ठाउँ लिन्छ, उनीहरु पक्कै पनी शर्मिंदा र शर्मिंदा महसुस हुनेछन्।
यदि एक साथी धेरै मेहनत गर्छ, स्थिति मात्र खराब हुन सक्छ। यो उहाँसंग अग्रिम छलफल गर्न को लागी राम्रो छ ताकि दस मिनेटमा उसले दम्पतीलाई एक्लै छोड्नेछ।
साथीको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जसले तपाइँलाई परिचय गरायो
कुराकानी को लागी एक उत्कृष्ट विषय पारस्परिक परिचितहरु हो, यो तपाइँ अनुचित intrusiveness बिना एक अर्कालाई हेर्न को लागी मद्दत गर्दछ।
तपाइँ पारस्परिक परिचितहरु को बारे मा गपशप को बारे मा कुरा गर्नुहुन्न, किनकि यस्तो वार्तालाप निश्चित रूप बाट, एक बुमेरांग जस्तै, फिर्ता आउनेछ र, सम्भवतः, एक विकृत रूप मा। र सबैलाई गपशप सुन्न मन पर्दैन।
तपाइँ एक राम्रो मुड मा एक मिति मा आउनु पर्छ।
धेरै अन्धा मितिहरु गल्तीले हताश मानिसहरुको काम हुन सोचेको छ। तपाइँ एक राम्रो मूड मा वार्तालाप गर्न आउनु पर्छ, ब्याज संग उसलाई व्यवहार, ताकि तपाइँ एक सुखद र उपयोगी साँझ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो पटक केटीलाई कसरी चुम्बन गर्ने?
कसरी बुझ्ने भन्ने बारे सुझाव
पछिल्लो के म सौना मा बियर पिउन सक्छु?
अर्को आलु र मशरूम संग ओवन मा चिकन
63 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,968 प्रश्नहरू।